Free Download Celtx u Mac | MacArsenal
> Resource > Mac > Celtx u Mac
Celtx waa nooc ka mid ah-fekrado oo dhan xirmo software kaas oo inta badan loogu talo galay kuwa ka shaqeeya ee Film, TV, Tiyaatarka, iyo warshadaha New Media. Waxaa ka mid ah feature full-scriptwriting iyo taageerada hodan pre-soo-saarka. Intaa waxaa dheer, waxa ay ku xidhan karto khayraadka online si aad PC iyo telefoonka gacanta iyo sidoo kale u oggolaadaan iskaashiga online.
Maamul qaar ka mid ah hawlaha pre-soo-saarka
Waxaa jira qaababka badan oo ka mid ah Celtx, oo ay ku jiraan qoraal, inputting, tafatirka iyo qabnay daabacaadda isticmaalaya foomka warshadaha caadiga ah. Waa maxay dheeraad ah, waxa ay sidoo kale maamuli kartaa qaar ka mid ah hawlaha pre-soo-saarka sida goobta iyo baadhi talent. Iyada oo intaas ku dartay warbaahinta oo ay ku jirto faylasha codka, video clips oo dheeraad ah, waxa loo qaadi karaa burburka-soo-saarka.
Connect khayraadka online si aad PC iyo telefoonka gacanta
Celtx isku xira online lacag la'aan ah iyo kheyraadka daruur ku salaysan iyo sidoo kale syncs qalabka aad mobile, taas oo ka dhigaysa mashaariic aad hal abuur leh mar walba la heli karo iyo ammaan badbaadiyey online daruurta, iyo Qalabka telefoonada gacanta, sida aad casriga ah iyo PC guriga. Waxaad u baahan tahay inaad saxiixdo Celtx website-ka, laakiin waa gebi ahaan lacag la'aan ah, sidoo kale.
Screenwriting, iskaashiga Project, maamulka & kaydinta
Celtx ka shaqeeya warshadaha ah cabiran screenwriting editor caadiga ah ee stageplays, qabnay AV, screenplays, riwaayadaha radio ama buugaagta sheekooyinka maadda ah. Intaa waxaa dheer, Celtx ku jira editor qani text u dulmari. Celtx sidoo kale lagu daro cinjirka in ay feature Typeset, kaas oo u fasaxaya u marto abbuurka iyo doorashooyin daabacaadda. Waxaa jira adeeg internetka ah oo ay bixiyaan Celtx loo yaqaan Celtx Studios iskaashi mashruuca la safeeyey iyo kaydinta file ee website-ka.
Xubno ka koombiyuutarka iyo Jadwal iyo Tag si fudud script kasta
Waxaad gali kartaa qabnay in Forum Celtx ee fiirinaya dadweynaha, dib u eegista faca iyo faallo. Waa maxay dheeraad ah, Celtx sidoo kale isticmaalka buuxa ee isha furan Mozilla Sunbird in la calendaring iyo jadwalka-soo-saarka ka qabtaan. Intaa waxaa dheer, Celtx ka kooban yahay shan iyo soddon xubno kala duwan, sida Actor ama Special Raadka, kaas oo lagu dari karaa in mashruuca. Arimahan waxaa ku dari kartaa macluumaad kala duwan iyaga, sida qoraalka ama warbaahinta. Celtx awood u qorayaasha iyo agaasimayaasha in DEAD xubno si fudud script kasta. Kuwani xubno tagged ka dibna la gaadhsiiyey kartaa in ay si toos ah script burburo, kaas oo awood u shaqaalaha wax soo saarka si ay u ogaadaan waxa xubno ka script ah oo ku baaqay in si fudud.